NAIROBI, Kenya - Wasiirka Dastuurka Koonfur Galbeed, Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegaya in Madaxwayne Shariif Xasan uu dalka Kenya kula kulmay Safiirka Israel Nairobi u fadhiya.
Shariif Xasan ayaa magaalada caasimada ah ee Nairobi ku sugan, halkaasi oo ay ku wehliyaan Madaxwaynayaasha maamuladda Puntland iyo Jubbaland, iyaga oo kulamo la qaatey qaar kamid ah safiiradda dalalka uqaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Wasiir Xasan oo u waramay warbaahinta ayaa gaashaanka ku dhuftay wararkaasi, isaga oo ku nuux-nuux sadey in Shariif Xasan uu kaliya Nairobi kulamo kula qaatey Beesha Caalamka ayna kawada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay dalka.
"Israel waa dalal kamid ah kuwa caaalamka, Madaxwaynaha lagama xakameeyo xafiiskeyga, balse hadii ay dhacdo inuu la kulmay, maba la kulminee, ma aqaano waxa halkaasi ku jaban, Nabiga [SCW] ayaaba la fariisan jiray," ayuu ku daray Wasiirka.
Shariif Xasan ayaa wajahaya loolan adag oo dhanka doorashadda ah, xili murashaxiin dhowr ah oo uu kamid yahay Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ay isku soo taageen qabashada xilka ugu sareeya maamulkaan, oo baratan adag loo geli doono.
"Wararkaasi waxaa faafinaya kuwa lacag lasoo siiyey oo sawiradda aad aragteen isku dhejinaya. Marka, waxaa muhiim ah in saxaafadu ay sheegto waxay hubto, ma ahan inaad i waydiisaan waxaa la sheegay," ayuu ku doodey Wasiirka Dastuurka.
Ugu dambeyn, Wasiirka Dastuurka Koonfur Galbeed oo wax laga waydiiyay amaanka degaanada maamulkaan maadaama doorasho kusoo food-leedahay ayaa tibaaxay in ciidamada ay kordhiyeen ciidamadooda howlgalada lagu sugayo nabad-gelyadda.
Shariif Xasan oo la filayo inuu kaharo Doorashada Koonfur Galbeed [XOG]
Soomaliya 05.11.2018. 19:27
Villa Somalia ayaa Xildhibaannada Koonfur Galbeed kasoo daabushay Baydhabo iyadoo...
Amniga Baydhabo oo walaac laga muujiyay, Shariif Xasan oo ilaaladiisa bedelay
Soomaliya 30.10.2018. 09:58
Wafdi ka socda beesha caalamka oo gaarey Baydhabo [Sawirro]
Soomaliya 31.10.2018. 16:43
Lacagta laga qaaday Murashaxiinta KG oo la ogaadey halka lagu bixinayo
Soomaliya 27.11.2018. 10:45
KG oo gashay xaalad kala guur ah iyo wasiirada oo amar la dul-dhigay
Soomaliya 12.11.2018. 20:16
Xildhibaanada KG oo ku kala aragti duwan hab-raaca Guddiga doorashada
Soomaliya 17.11.2018. 07:31